Warar - Isniinta sannadka cusub ee Shiineeska iyo nidaaminta amarka ilaaliyaha shaashadda
Sannadka Cusub ee Shiinaha ayaa imanaya markii waqtigu sii socdo, oo sidoo kale loo yaqaan 'Festival Festival'. Waa dabaaldeggii ugu weynaa ee ka dhaca Shiinaha, oo leh toddobo maalmood oo fasax ah. Munaasabada sanadlaha ah ee ugu quruxda badan, Sanadka Cusub ee Shiinaha wuxuu socdaa laba toddobaad, ugu dambayntiina waxay timaaddaa agagaarka Sannadka Cusub ee Shiinaha, oo ay la socdaan laambado casaan ah oo casri ah, rashka waaweyn ee codbixinta, cashooyinka qoysaska iyo bandhigyo.
Markii uu dillaacay cudurka 'cowid-19' sanadkii 2020, waxay beddeleysaa nolosha dadka iyo shaqada. Iyada oo ka hortag wax ku ool ah iyo xakameynta dowladda Shiinaha, nolosha dadka waxay ku soo noqotay xaalad caadi ah. Laakiin markii cimiladu qabowdo, heerka infekshanku wuu kordhayaa. Dawladdu waxay ugu baaqeysaa dadka inay kubixiyaan Bandhigga Guga goobahooda shaqo oo ay abaabulaan saacadaha furitaanka ee khaldan ee shirkadaha si looga fogaado qulqulka dad aad u tiro badan.
Markii ay bilaabatay socodka safarka Xilliga Guga, howlwadeennada gaadiidka ayaa adkeeyay tallaabooyinka looga hortagayo soo noqoshada kiisaska COVID-19 waxayna siiyaan adeeg wanaagsan rakaabka.
Inta badan shaqaaluhu waxay ka yimaadeen gobol kale, sidaa darteed waxay qorsheynayaan inay dib ugu laabtaan magaaladoodii si ay u midoobaan qoyskooda. Marka maamulku wuxuu kugula taliyay in la bilaabofasaxa CNY laga bilaabo Janaayo 30th ilaa Feb 15th. Dhammaan khadadka wax soo saarka ee ilaaliyayaasha shaashadda ayaa la xidhi doonaa Febraayo 3deeda.
1. Amarada la saxiixay ka hor Jan 15-keeda, ayaa la soo diri doonaa ka hor fasaxa
2. Amarada la saxiixay wixii ka dambeeya Jan 15-keeda, waxaa loo diyaarin doonaa in la soo saaro fasax kadib, oo la bixiyo kahor Maarso.
Macaamiishayadu wali way awoodaan inay laxiriiraan dadkayaga suuq geynta iyo iibka si aan udhameysano shaqooyinka laxiriira una bilaabaan qorshaha iibsi cusub ee ilaalada shaashadda. Iyo shaqada wax soo saarka fasaxa kadib fasax ayaa sidoo kale la habeeyay.
Fadlan aqbal rabitaankayaga daacadnimada leh ee Sannadka Cusub lamaanahayaga iyo macaamiisheenna.
Sannadka Cusub ha u keeno waxyaalo badan oo wanaagsan iyo barakooyin hodan ah adiga iyo dhammaan kuwa aad jeceshahay, waxaan rajaynayaa inaad haysato sanad farxadeed oo barwaaqo badan.
Waqtiga boostada: Jan-30-2021